Cristiano Ronaldo oo barbareeyey Rikoorkii uu haystay Josef Bican ee ahaa laacibka ugu goolasha badan taariikhda kubadda cagta – Gool FM
(Turin) 11 Jan 2021. Cristiano Ronaldo ayaa barbareeyey Rikoorkii uu haystay Josef Bican ee ahaa laacibka ugu goolasha badan taariikhda kubadda cagta.
Kaddib markii uu dhaliyey goolkii saddexaad ee Juventus ay dhalisay xalay kulankii ay ka horjeedeen Sassuolo, Cristiano Ronaldo ayaa noqday gooldhaliyaha guud ahaan ugu sarreeya goolasha rasmiga ah taariikhda kubada cagta.
Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyey goolka saddexaad ee Juventus kulankii ay xalay 3-1 uga adkaadeen history, waxaana uu Bican kula biiray xiddiga ugu goolasha badan koox iyo waddan taariikhda kubadda cagta, isagoo CR7 sidaas ku dhaliyey guud ahaan 759 gool xirfaddiisa.
Ronaldo ayaa sidaas ku barbareeyey Josef Bican, iyadoo Weeraryahankan Austrian iyo Czech uu ciyaaray intii u dhexeysay 1931 iyo 1955.
Todobaadkii ugu horreeyey sanadka, xiddiga xulka qaranka Portugal ayaa soo dhaafay halyeyga reer Brazil ee Pele kaasoo loo diiwaan geliyey 757 gool oo rasmi ah.
Dhinaca kale Ninka ay Ronaldo xafiiltamaan muddada dheer ee Lionel Messi ayaa ku jira booska shanaad.
Laacibkan oo 36-sano jirsan doona bisha soo aaddan ayaa haatan qarka u saaran inuu si aan muran ku jirin ku noqdo xiddiga ugu goolasha badan taariikhda kubadda cagta, waxaana uu u baahan yahay hal gool si uu u gaaro rikoorkaas oo uu u noqdo ciyaaryahanka ugu goolasha badan Taariikhda kubadda cagta.
RASMI: Man United vs Liverpool - Isku aadka wareegga afaraad ee tartanka FA Cup-ka oo la sameeyey